उमेरभन्दा ४० वर्ष कान्छी देखिन्छिन् यी महिला, के होला रहस्य ? – Pahilo Page
८ आश्विन २०७५, सोमबार १७:२५ 1143 पटक हेरिएको
काठमाडौं, ८ असोज । अमेरिकाकी मोडल सुसान लुसी आफ्नो लुकले सबैलाई धोका दिइरहेकी छिन् । उनी वास्तवमा ७१ वर्षको उमेर पुगिसकेकी छन् तर आफ्नो वास्तविक उमेरभन्दा झण्डै ४० वर्ष कान्छी देखिन्छिन् ।
लुसीले अझै पनि स्वीमसुटमा पोज दिन्छिन् । उनले यो फोटोसुट हार्पर्स बजारको अक्टोबर संस्करणको लागि दिएकी हुन् । यो फोटोसुटमा देखिएका फोटो हेरेपछि मानिसहरु उनको सुन्दरता र फिटनेस हेरेर चकित परेका छन् । उनी यो उमेरमा पनि हप्ताको ६ दिन काम गर्छिन् । उनले आफ्नो फिटनेसका विषयमा केही रहस्य पनि खोलेकी छिन् ।
लुसीले यो फोटोसुट गर्दा आफू २० देखि ३० वर्षको बीचको उमेरमा जस्तै आफूलाई अनुभूति भएको बताएकी छिन् । उनले वुमन हेल्थ नामको एक म्यागजिनको लागि दिएको अन्तरवार्तामा आफ्नो सुन्दरताको रहस्य खोलेकी छिन् । उनले फिटनेसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो आफ्नो निरन्तर परिश्रमलाई मानेकी छन् । उनी हरेक दिन बिहान एक्सरसाइज गर्छिन् । उनले कहिल्यै पनि एक्सरसाइज छुटाउँदैनन् । उनी एक्सरसाइजकै लागि डान्स पनि गर्छिन् ।
खानामा निकै सतर्कता अपनाउँछिन् लुसी । उनले आफ्नो स्वादमा नियन्त्रण राखेकी छन् । उनलाई सम्झना पनि छैन कि उनले पछिल्लोपटक चीज, बर्गर र फ्रेन्च प्राई कहिले खाएकी थिइन् ? उनले कहिलेकाहीँ मात्र डेजर्ट खान्छिन् । स्न्याक्समा पनि केही खाँदैनन् । ब्रेड र पास्ता पनि कहिलेकाहीँ मात्र खान्छिन् । उनलाई स्याण्डविच निकै मन पर्छ तर यसमा पनि ब्रेडको सट्टा आलु र प्रोटिन प्रयोग गर्छिन् । उनी वाइन पनि १ ग्लास मात्र पिउँछिन् ।